၅၂၀ မိုင် Plaid+ ရွေးချယ်စရာနဲ့ အတူ အဆင့်မြှင့်တင် ပေးလိုက်တဲ့ Tesla Model S ! – MyMedia Myanmar
၅၂၀ မိုင် Plaid+ ရွေးချယ်စရာနဲ့ အတူ အဆင့်မြှင့်တင် ပေးလိုက်တဲ့ Tesla Model S !
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းကပဲ Model S ကို ချပြခဲ့ အပြီးမှာ Tesla ဟာ အခုဆိုရင် ပိုပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ် လည်းရှိ ၊ ဒီဇိုင်းပိုင်း အရ‌ရော စွမ်း ဆောင်ရည်အရပါ ပိုကြည့်ကောင်းမယ့် အသွင်သစ်တွေကို ထုတ်ပေးလိုက်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီးပွား ရေးအပိုင်းမှာလည်း ပိုပြီး အား စိုက်တဲ့ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ရှယ်ယာ ရှင်တွေကိုလည်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ခဲ့ သေးပြီး Website ကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ကာ Plaid+ ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာတစ်ရပ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ အဆိုပါ ရွေးချယ် စရာမှာ‌တော့ 520-Mile Range ၊ နှစ်စက္ကန့်ပမာဏ အတွင်း0ကနေ 60 စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အမြင့်ဆုံး 200 mph အပြင် 8-Second Quarter Mile စတဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ပါ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တာ ပါ။ အခု အချိန်ထိတော့ Tesla အနေနဲ့ ပိုမိုတိကျတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အချက်အလက်တွေကို ချမပြသေးပေမယ့်လည်း သေချာတာကတော့ ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ် ခဲ့ပြီးသမျှ ကားတွေထဲမှာ Model S ကို အမြန်ဆုံး ဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
Plaid+ ဆိုတဲ့ Powertrain ရွေးချယ်စရာ အသစ်ကတော့ အခြားသော အခွန်အခတွေ မပါဝင်သေးပဲကို $ 139,990 အထိကျသင့်မှာ ဖြစ် ပြီးတော့ အခုနှစ် နှောင်းပိုင်းလောက်မှာ ရရှိနိုင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု Model S Trims အကုန်လုံးမှာတော့ Powertrain အပိုင်းတွေ ကို အဆင့်မြှင့်တင် ပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီအပိုင်းတွေ ၊ ဘက်ထရီ Modules တွေနဲ့ Drive Units တွေကို ပါ အဆင့်မြှင့်တင် ပေး ထား ပါသေးတယ်။ Base Dual-Motor Model S Long Range အသစ် ကိုတော့ လာမယ့် မတ်လမှာ စတင်ရရှိ နိုင်ပြီး 412 Model Range ( Long Range Plus ထက် ၁၀ မိုင် ပိုမြန် ) ရှိလာမှာ ဖြစ်ကာ ဈေးနှုန်းအရတော့ $ 79,990 ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 390 Mile လောက် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ့် Model S Plaid ဆိုလည်းအခု ဆိုရင် $ 119,000 လောက်နဲ့ ရနိုင်တော့မှာပါ။ ကားရဲ့ အပြင်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲ သွားတဲ့ အရာတွေဟာလည်း အတော်လေးထူးခြား ပြီး Model S ကို ယခင် ကထက်ပိုပြီး Aggressive ဖြစ်တဲ့အသွင် ဖန်တီးပေးလိုက်နိုင် ကာ Sleek ပိုဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုလည်း ရရှိနိုင်သေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လွန်ခဲတဲ့ ၉ နှစ်တုန်းက မူလဒီဇိုင်းပိုင်းကို သေချာလေး ဖန်တီးထားခဲ့တာကိုပဲ ချီးကျူးရမှာဖြစ်ပြီ အခုလိုမျိုး ခေတ်နဲ့အညီ ပုံစံတစ်ရပ် ထွက်ပေါ်လာအောင်လို့ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲစရာ မလို တော့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ အပြောင်းအလဲ များမယ့်ဒီဇိုင်း အပြောင်းအလဲ ကတော့ အတွင်းခန်း ပိုင်းမှာ စပြီးမြင်ရမှာပါ။
အခု ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ အပိုင်း မှာတော့ အတွင်း ခန်းကို ရိုးရှင်းပြီး သပ်ရပ်တဲ့အသွင် ဖြစ်သွားစေပြီး ယခင် Model3နဲ့ Model Y တို့မှာ လိုမျိုး ဒေါင်လိုက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ Screen လည်း မပါဝင်တော့ပါဘူး။ အနောက်ဘက် က ခရီးသည်တွေ ဆိုရင်လည်း Center Console မှာ တပ်ဆင် ပေးထားမယ့် Screen အသေးလေးက တစ်ဆင့် ကြည့်ရှုလို့ရတော့မှာ ဖြစ်ကာ ကားအတွင်းခန်းရဲ့ ဖျော်ဖြေရေး အပိုင်းတွေကို Tesla ဘက်က ပိုအားထည့်ဖို့ ကြိုးစားနေပုံ ရပါတယ်။ Dash Cluster ကတော့ ယခင်လိုမျိုး အတူတူပဲ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း Cockpit အပိုင်း မှာတော့ ထူးခြားတာ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက‌တော့ လေယာဉ်တွေမှာပဲ ‌မြင်တွေ့ ရလေ့ရှိတဲ့ Rectangular စတီယာတိုင် ပုံစံကို အသစ် အဆန်းအနေနဲ့ အစားထိုး မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။
ဘာပဲပြောပြော အခုလို စတီယာတိုင် ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ကားကို မြင်လိုက်ရတော့ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေဆီက သိပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမျိုးကို ပြန်လည် ပုံဖော်ကြည့်မိသလို ဖြစ်ရပြီး တော်တော်လေး ခေတ်လွန် အသွင်အပြင်နဲ့ အတွင်းခန်း ပုံစံတစ်ရပ်ကိုတော့ Tesla တို့ ဆွဲခေါ်သွားခဲ့ပါပြီ။ အခြားသော ကားထုတ်လုပ် ရေးသမားတွေကလည်း အခုလိုမျိုး စတီယာတိုင်ကို ကြိုးစားခဲ့ကြသေးပေမယ့် အကြောင်းအမျိူးမျိုး ကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပဲ လက်လျှော့ခဲ့ရတာ ကြာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ‌ကြောင့် အခု ဒီဇိုင်းအသစ်ကို ရဲရဲကြီး ချသုံးလိုက်ခြင်းက အောင်မြင်မလား ၊ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဆိုတာ ကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပြီး သေချာတာကတော့ ကားပါကင်ထိုးမယ့် နေရာမှာ Model S ပိုင်ရှင်တွေ အခက် တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါကားမှာ အပြည့်အ‌ဝမောင်းသူမဲ့ စနစ်ကိုလည်း ‌ဒေါ်လာ တစ်သောင်း အပိုဆောင်းထပ်ပေးမယ် ဆိုရင် ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ဦးမှာ ဖြစ်ပြီး Autopark နဲ့ Simmon စနစ်တွေပါ ပါဝင်မှာပါ။ အဆိုပါ စနစ်ကတော့ ကားကို ပါကင်ထိုးတဲ့ နေရာမှာ Slim Rectangle ကို အသုံး ပြုပြီး ဘယ်လို နေရာမျိုးမဆို အဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးနိုင်မယ့်အခြေအနေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ၅၂၀ မိုင် Plaid+ ရွေးချယ်စရာနဲ့ အတူ အဆင့်မြှင့်တင် ပေးလိုက်တဲ့ Tesla Model S ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-29T19:33:15+06:30January 29th, 2021|MYCARS MYANMAR|